Manazava ny Expert of Semalt Islamabad ny fomba fiasan'ny mpikaroka
Ny asa s fikarohana dia manatanteraka asa samihafa, toy ny tranokala mitsingevana, manangana ny endriky, ary manome ny mpampiasa lisitry ny tranonkala malaza araka ny fikarohana sy ny teny fanalahidy. Ny fijanonana tsirairay dia ny antontan-taratasy tokana (pdf, tranonkala, jpg, png, na hafa), ary ny raki-tranonkala dia mikaroka ny tranonkala iray manontolo mampiasa ity rakitra ity. Mametraka fijanonana feno izy ireo ary mamaritra ny hatsaran'ny backlinks amin'ny tranonkala samihafa. Ireo singa roa fototra amin'ny milina fikarohana dia:
Sohail Sadiq, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt Digital Services, mizara ireo toro-hevitra mahasoa momba izany.
1. Famaritana sy fitifirana tranonkala: ny milina fitadiavana isan'andro dia mitifitra an-tserasera an-tserasera, tranonkala, lahatsoratra, lahatsary, rakitra, ary ny media - vps cheap europe.
2. Manome valiny marina: ny milina fikarohana koa dia manome ny valin'ny fangatahan'ny mpampiasa amin'ny endriky ny lisitra sy ireo pejy manan-danja izay raisin'izy ireo sy raisiny ho tomban'ezaka.
Ahoana no ahafantaran'ny mpamily ny laza sy ny maha-zava-dehibe azy?
Ho an'ny Google, Bing, Yahoo ary ny fitaovam-pikarohana hafa, ny dikany dia midika hoe mitady ny teny fototra sy fehezanteny marina. Nisy fotoana izay nanomezan'ny fitaovam-pitadiavana tamintsika angona voafetra. Ary ankehitriny ireo injeniera mahay sy matihanina dia nanamboatra ny fomba hanampiana ny valin'ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny fomba mahomby. Hetsika an-jatony an'arivony izao no manan-danja eo amin'ny maha-zava-dehibe izany, ary ny fitaovan'ny fikarohana dia mihevitra fa ireo tranonkala malaza indrindra dia ahitana ny angona azo antoka indrindra sy marina. Izany fahombiazana izany dia nahomby teo amin'ny fahafahan'ireo mpampiasa Google, Bing, ary Yahoo. Ny fitaovam-pikarohana dia mampiasa algorithm manokana mba hametrahana tranonkala samihafa, ary ireo algorithm ireo dia misy karazany an-jatony an'arivony..Ao amin'ny sehatry ny varotra, ireo manam-pahaizana dia manondro ireo algorithmes ho toy ny filaharana fototra.
Ahoana no fomba hahombiazantsika?
Toa tsy hay hadinoina ny algorithms amin'ny milina fitadiavana, saingy ireo fitaovam-pitaterana dia manome fampahalalana kely momba ny fanatanterahana ny vokatra tadiavina na ny kalitaon'ny kalitaon'ny fanatanjahantena tsy tapaka. Matetika, ny milina fikarohana dia manome antsika ny vaovao momba ny SEO sy ny fomba hanatsarana ny tranokalanao.
Google sy ny fitaovam-pikarohana hafa dia manoro ny fanarahana ny lalao tsaratsara kokoa:
1. Ataovy ho an'ny mpitsidika ny pejy voalohany, fa tsy ho an'ny milina fikarohana. Tsy tokony hamitaka ny mpiserasera ianao ary tsy hampiseho ny votoatiny diso tsara kokoa ho an'ny mpikaroka .
2. Amboary ny tranonkalanao miaraka amin'ny sehatr'asa mazava sy ny rohy fanamarinana kalitao. Ny pejy rehetra dia tokony ho azo vakiana ary azo tratrarina raha toa ka misy rohy iray eo amin'ny sisiny iray amin'ny ankapobeny.
3. Tokony hamorona, tranonkala informatika ary mahasoa, ary manoratra lahatsoratra izay mamaritra tsara ny vokatrao sy ny serivisinao.
4. Tokony hampiasa teny sy fehezanteny tena ilaina mba hamolavolana URL-n'ny olona sy ny famaritana azy. Zava-dehibe ny manolotra dikan-teny tokana amin'ny URL iray mba tsy hitodihan'ireo mpampiasa amin'ny pejy 301 noho ny votoaty dika mitovy.
Tsy misy tahotra mihitsy
Ankoatra ireo torohevitra sy toro-hevitra ireo, ny mpikaroka fikarohana dia nahita fomba fomba handraisana ny vaovao mifototra amin'ny laharan'ny pejy. Ankehitriny, ireo mpivarotra sy SEO dia mampiasa code sy data manokana mba hanampy ny tranokalany sy ny bilaoginy hahatratra ny toerana tsara kokoa amin'ny valin'ny fikarohana . Mahagaga fa manohana ny ezaka samihafa ny milina fikarohana ary manome torohevitra mahasoa ho an'ireo mpampiasa azy. Na ireo solontenan'ny fikarohana aza dia manampy ny webmaster sy ny mpitoraka bilaogy amin'ny fandraisana anjara amin'ny lahatsoratry ny blaogy, forum, ary adihevitra momba ny vondrona.